कोरोनाविरुद्धको खोपले कहिलेसम्म गर्छ काम? – Health Post Nepal
कोरोनाविरुद्धको खोपले कहिलेसम्म गर्छ काम?
२०७८ जेठ २९ गते १०:४८
महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्व नै आक्रान्त भएको छ। ३८ लाख बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने १७ करोड ६० लाख बढी संक्रमित भएका छन्।
कोरोनाबाट बच्न विभिन्न मुलुकले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तीव्र गतिमा खोपको परीक्षण र लगाउने काम भइरहको छ। नेपालमा पनि विभिन्न देशबाट प्राप्त भएका खोपलाई लक्षित वर्गअनुसार लगाइँदै छ।
तर, बेलाबेलामा नयाँ भेरियन्टका कोरोना भाइरस उत्पत्ति भइरहेका छन्। यो खोप निर्माता तथा वैज्ञानिकलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। नयाँ भेरियन्टमा उत्पादित खोपले काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने परीक्षणहरु पनि भइरहेका छन्।
महामारीलाई रोक्न एउटै उपाय भनेको खोपसँगै निषेधाज्ञा बनेको छ। जसले विश्वको अर्थतन्त्र नै कमजोर बनाइरहेको छ।
खोपमा विभिन्न मुलुकहरुले जोड दिइरहेका छन्। तर, हामीहरुले लगाउने खोपले कति समयसम्म काम गर्छ त? यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले भने खोपले मृत्यु र अस्पतालामा भर्ति हुने दरलाई कम गर्ने भएपनि यसले कति समयसम्म काम गर्छ भन्ने कुरामा भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। उसले यसबारे हालसम्म आफूहरुसामू कुनै जानकारी नै नभएको बताएको छ।
‘अहिले विश्वमा जतिपनि खोप आएका छन्, तिनले कति समय काम गर्छन् भन्ने एकिन गरि भन्न गाह्रो छ। यसमा अध्ययन नै भएको छैन। तर, आगामी १२ महिनाभित्र यो सबै तथ्यहरु बाहिर आउनेछन्।’, डब्ल्यूएचओले भनेको छ।
डब्ल्यूएचओले प्रत्येक खोपको सुरक्षा अलगअलग हुने बताएको छ। उसले भनेको छ, ‘जस्तो कि सिजनल इन्फ्लुएन्जाको खोप प्रत्येक वर्ष दिइन्छ। किनकि, यसको भाइरसले आफ्नो रुप बदलिरहन्छ र विस्तारै खोपको प्रभावकारीता घट्दै जान्छ। तर, केही खोपले जिन्दगीभर सुरक्षा दिन्छन्। जस्तो, दादुरा।’
वर्तमानमा वैज्ञानिकहरु यो अध्ययन गरिरहेका छन् कि उपलब्ध भएका खोपले के बद्लिँदो स्वरुपका कोरोना भाइरसविरुद्ध लामो समयसम्म काम गर्न सक्छ त?
‘कतिपय खोप निर्माताहरु अहिले हरेक प्रकारका भेरियन्टमाथि अध्ययन गर्दै खोप बनाइरहेका छन्। खोपसँगै उनीहरुले बुस्टर डोजपनि बनाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। जसले हरेक भेरियन्टका कोरोनाबाट मानिसलाई सुरक्षित राख्नेछ।’, डब्ल्यूएचओले भनेको छ।